E.T. [OVNI] No Mifehy Ny Fihetsiketsehana Ao Hong Kong, Ary Mahita Izany Ny Vaovao Rosiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Oktobra 2014 8:03 GMT
Efa nampafantatra ny eritreriny i Rosia fa tafiditra amin'ny fikarakarana ny fihetsiketsehana manohana ny demaokrasia ao Hong Kong i Etazonia, izay voalaza fa te-hanasazy an'i Shina noho izy manohana ny Rosiana ao Okraina. Saingy nilaza ny tranokalam-baovao Rosiana ankehitriny fa mety ho misy hery tsy fantatra avy any ivelany ao ambadik'ity fihetsiketsehana goavana ao Hong Kong ity.
Namoaka ilay vaovao mampitolagaga ny habaky ny fahitalavitra federaly Rosiana REN-TV ary nanampy lahatsary (ahitana marika misy ny fangon'ny TV Sheeple) mihitsy aza, izay milaza fa nisy OVNI manalokaloka eo ambonin'ny vahoaka. Tsy azo lavina ny porofo navelatry ny fahitalavitra.
Sady nanala azy no talanjona ihany koa ireo mpisera RuNet raha nahita ny vaovao, ary toy izao ny antony. Tamin'ny fahitàna azy voalohany, mety mihevitra ny sasany fa teorian'ny teti-dratsy fanampiny fotsiny ny an'ny REN-TV. Saingy raha ny marina, fantso-pahitalavitra federaly tsy miankina goavana indrindra ao Rosia ny REN-TV, manana tambajotram-pahitalavitra maherin'ny 400 manerana ny firenena, ary voalaza fa manana mpijery maherin'ny 120 tapitrisa. Mazava ho azy raha sanganehana tamin'ny kalitaon'ny vaovao notaterina ireo mpiserasera.
Nahoana no ny fahitalavitra federaly???
Etsy andaniny, araka ny fihevitr'ireo mpisera Twitter sasany, farafaharatsiny mba napetraka naka aina indray ankehitriny ny fiampangana ny Tandrefana.
Eny, farafaharatsiny mba tsy fahadisoan'ny Amerikana izy ity
Ny sasany kosa nahatsiaro ny fanadihadiana goavan'ny REN-TV vao haingana izay nilaza fa tantanin'ny olombelona ivelan'ny tany (extra-terrestre) i Etazonia, ary nanontany raha teti-dratsy goavana izany.
Mety ho E.T. Nazis ireo.
Rehefa ny fahitalavitra Rosiana malaza manana mpijery an-tapitrasany no mitatitra vaovaon'ny raharaham-bahiny sy ny fihetsiketsehana goavana manohana ny demaokasia amin'ny fomab fijery hafahafa tahaka izao, ary mandefa izany amin'ny aterineto, dia lasa ny fanontaniana hoe: Tena ilaina tokoa ve ny miahiahy ny mety ho fanapahana ny harato [tranonkala] Rosiana? Toa manao ny asa fanakanana ny fivezivezen'ny vaovao azo antoka an-kalalahana ihany koa ny famenoana ny RuNet amin'ny lainga sy ny teorian'ny teti-dratsy.